IDEA MAGAZINE: သူငယ်ချင်း
Sunday, October 11, 2009 at 1:22 PM
ဒိုင်နိုဆော ကို နှစ်ပိုင်းခွဲလျှင် ဒိုင်နို-ခွန်အားကြီးမားသော၊ ဆော( ဆောရပ်စ် ဆိုတဲ့စကားကလာတာ) အိမ်မြှောင် ဟူ၍ရသည် ... ခွန်အားကြီးသောအိမ်မြှောင်ကြီးများသည် ကမ္ဘာကို နှစ်သန်းပေါင်း ၁၆၀ အုပ်စိုးသွားခဲ့ဖူးသည် ...။ယခု ဒိုင်နိုဆောများ မျိုးတုန်းသွားပြီဖြစ်သည် ...။ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ အယူရှိသည့် လူသည် ဒိုင်နိုဆောနှင့်ယှဉ်လျှင် ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းတွင်သိသိသာသာ အားနည်းနေပြီး အချင်းချင်းရန်လိုမှုနှင့် လောဘစိတ်တွင် သိသိသာသာ အားကောင်းနေသည်။ ယခု လူသားများသည် နယူကလီးယား စွမ်းအင်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟူ၍ ဂုဏ်ယူနေကြသည် ...။ သို့သော် မိမိတို့၏ စိတ်ကို နိုင်နင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟု အာမမခံနိုင်သေး ...။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် စစ်ပွဲတွင် အသုံးမပြုရန် ကန့်သတ်ထားသော နယူကလိယ ထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးကျည်များ ကမ္ဘာ့လေထုထဲတွင် ၀ဲပျံလာနိုင်သေးသည် ...။ လူသည် အချင်းချင်းစိတ်မချရတော့သည့် စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ တရွေ့ရွေ့ချဉ်းကပ်လာသည်။
မသေချာမှုများဖြင့် ချိန်သီးအလွှဲကြမ်းလာသော ရာစုသစ်ထဲတွင် ... လူသားအားလုံး စိုးရိမ်မှုတစ်ခုစီမက ရှိနေကြသည်။ မသေချာမှုများထဲတွင် တစ်ခုခုကိုတော့သေချာလိုက်ချင်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများအဆိုအရ ဘုရားသခင်သည် လူကို ဖန်ဆင်းချိန်တွင်မြေကြီးကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် ... မကြာမကြာ ဗွက်ထနေသော စိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ ထိုစိတ်သည် တစ်ခုခုကိုလိုအပ်နေတတ်သည် ...။ မတည်ငြိမ်သော လောကတွင် တစ်ခုခုကို ယုံကြည်လိုက်ချင်သည်။ ... တစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်ချထားချင်သည် ...။ ထိန်ချန်ထားရန်မလိုသော နားတစ်စုံကို လူသားတိုင်း လိုချင်ခဲ့ကြသည် ...။ မိမိကိုယ်မိမိ ထက်နားလည်ပေးနိုင်မည့်သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေချင်စိတ်သည် ... ဘုရားသခင်၏ မြေကြီး မသန့်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်...။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကနားလည်လျှင် အနည်းဆုံးစိတ်ချမ်းသာရမည်ဟု လူသည်တွေးတောလာသည်။ ထိုကြောင့် တွေ့ရှိသမျှ ပရိုင်းမိတ်များသည် အစုအဖွဲ့နှင့်နေ၍ အစုအဖွဲ့နှင့်သာသေကြသည်။ ကမ္ဘာဦးလူသည် ပထမဆုံး သူငယ်ချင်းကို တင်းပုတ်ဖြင့် ရိုက်မိကောင်းရိုက်မိနိုင်သည်...။ သို့သော် သူ၏ မညီညာသေးသော သွားများဖြင့် ရယ်ပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့မည်မှာသေချာသည်။ အမွှေးအမျှင်ထူထပ်သော လက်များဖြင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ပွေ့ဖက်ကာ မပီမသ အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ရင်း ပျော်ခဲ့ကြမည်မှာသေချာသည်။ သူငယ်ချင်းဟူသော ဝေါဟာရသည် နှလုံးခုန်သံများကို ပျော်ရွှင်စေသာ ဂုဏ်သတ္တိရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ဂူအောင်းလူသည် သူ့သူငယ်ချင်းပုံကို ကျောက်တုံးနှင့်ဆွဲပြီး တဟားဟားရယ်နေမည်ဟု မသေချာသော ကောက်ချက်ကို တွေးတောခြင်းဖြင့်သာ ခိုင်ခိုင်မတ်မတ် လက်ခံမိသည်။
ရာဇ၀င် အဆက်ဆက်တွင် သူငယ်ချင်းကောင်းများသည် ရှားပါးခဲ့ကြသည်..။ အသက်တစ်ရာမနေရသော်လည်း အမှုတစ်ရာပွေရသည်ဟုသာရှိသည်။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရရန် အသက်သည် အာမခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ..။ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းများသည် ကျောင်းနေဖက်များသာဖြစ်သည်။ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းများသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မျှသာဖြစ်သည်။ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းများသည် မေးထူးခေါ်ပြောသာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့သူငယ်ချင်းများသည် လမ်းတွေ့လျှင်ပြုံးပြရုံသာဖြစ်သည်။ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းများဆီသို့ နာရေးကိစ္စမှအပ သွားရန်မလိုအပ်ပါ။ကိုယ့်နှလုံးခုန်သံဖြင့် အသက်ရှူနေသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သင်ရချင်ခဲ့ပါသလား ...။ သင်ငိုနေလျှင် တိတ်ဆိတ်စွာ စောင့်ဆိုင်းနားလည်ပေးနိုင်သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သင်တွေ့မိခဲ့ပါသလား ...။ သူ့ကိုယ်သူထက် သင့်ကို ပိုစိတ်ပူတတ်သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးကို သင်မည်သို့သတ်မှတ်ပါသလဲ ...။ သူငယ်ချင်းဆိုသည်မှာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုစရာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ခံစားနားလည်ရသော တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်သာဖြစ်သည်။
လိုနေတဲ့အချိန်မှာရှိမှ သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့စကားပုံကိုမယုံကြည်ပါ။ သူငယ်ချင်းဆိုသည်မှာ သူ့အလုပ်နှင့်သူသာဖြစ်၍ ကိုယ်လိုနေချိန်တိုင်းရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မည်။ သူငယ်ချင်းဆိုသည်မှာ စာခြောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို တစ်နေရာထဲတွင်အမြဲရပ်တန့်နေသောသဘောမရှိဟုယူဆပါသည်။ ငယ်တုန်းက ခင်မင်ခဲ့ခြင်းမှာ တစ်သက်လုံးဆက်လက်ခင်မင်နေမည်ဟူသော ကတိက၀တ်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါ...။ သူငယ်ချင်းများသည် ရာသီဥတုလို ပြောင်းလဲတတ်သည် ...။ သူငယ်ချင်းများသည် ဗြဟ္မစိုရ် တရားလိုခေါင်းပါးတတ်သည်။သူငယ်ချင်းများသည် ၀ိုင်ပုလင်းများလို နှစ်ချို့လေ တန်ဖိုးကြီးလေဟု တစ်ထစ်ချမယူဆခဲ့ပါ ...။ သံပုရာသီးများလို ကြီးလေချဉ်လေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထင်မြင်ယူဆချက်များမှားယွင်းသွားကြသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် တန်ရာတန်ကြေးမပေးဘဲ အလကားရချင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ စိတ်ချမိသောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ဖို့လိုသည် ဟူသောစကားမှာရယ်စရာကောင်းလှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူငယ်ချင်းကောင်းများမရရှိခဲ့ဖူးသောကြောင့် ကိုယ်တိုင် မည်သို့ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမည်ဟု မသိခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မဆိုးသော သူငယ်ချင်းများကို သူငယ်ချင်းကောင်းဟု ခေါ်နိုင်ပါသလား။ ထိုမေးခွန်းသည် ရယ်စရာမကောင်းကြောင်း သင်လည်းသိပါလိမ့်မည်။
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုသည်မှာ လိုအပ်ရင် အသက်ပေးသည်ဟု ပြောကြသည်။ အသက်ကိုပေးလိုက်ရခြင်းမှာ သိပ်အပန်းမကြီးလှပါ။ အကယ်၍ တစ်ချိန်တွင် အသက်တစ်ခုပေးလိုက်ရုံမျှဖြင့် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရှိမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်အား အကြောင်းကြားစေလိုပါသည်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ အပြုံးသည် စံပယ်ပန်းတစ်ပွင့်ထက် ဖြူစင်မွှေးမြသည်ဟူသော အဆိုကို ကျွန်ုပ်က လက်ခံမိသည်။ နေ့တိုင်းအရိပ်တကြည့်ကြည့်စိုက်ပျိုးထားသော အပင်လေးတစ်ပင် အပွင့်ပွင့်လာတိုင်း ၀မ်းမြောက်တတ်သူများသည် အပင်သေသွားသောအခါ ငိုရတတ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် နှလုံးသွင်းမှားခဲ့သော ဥယျာဉ်မှုးတစ်ယောက်ကို မလှောင်ပြောင်ရက်ပါ။ သေဆုံးသွားသော ပန်းပင်လေးတစ်ပင်သည် သူ့ဘ၀၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ဟု ခံစားမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထွက်ခွာသွားသော သူငယ်ချင်းအတွက် ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်မှာ မေတ္တာပို့သည့်အခါ မသိမသာ မေ့လျော့ထားလိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤကိစ္စသည် မဖြစ်နိုင်မှန်း အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်သည်။
မိမိစိတ်ကို မသိသူတစ်ယောက်သည် သူတစ်ပါးကို နားလည်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အထင်မှားခြင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ချမ်းသာချင်သူသည် အပူများအနားသို့မလာပါ ...။ ဝေးဝေးမှာအေးအေးနေပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့နေခြင်းမှာ သူ့ကိုယ်သူနားလည်သောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ သူသည် ပူလောင်မှုများကိုသာ မုန်းတီးတတ်သော်လည်း အပူကိုသယ်ဆောင်လာသူများကို မမုန်းတီးတတ်ပါ။ သူသည် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အသက်ရှူရန်ကိစ္စတစ်ခုလို လိုအပ်နေခဲ့ပြီး သူလိုအပ်သော အသက်ရှူကိရိယာအတွက် သူ့တွင် ကံတရားအလုံအလောက်ပါမလာခြင်းမှာ ပါရမီနုံနဲ့မှုတစ်ခုသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အတွက် ငိုကြီးချက်မဖြစ်နေလောက်အောင် သူလည်းမအား။ ထို့ကြောင့် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ကို ရခြင်းမရခြင်းမှာ ကံတရားနှင့်ဆိုင်သည်ဟု သူတွေးခဲ့သည်။ ထိုအယူအဆအတွက် ကျွန်ုပ်က သူ့ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ သတ္တ၀ါတစ်ခု ကံတစ်ခုဟုပြောနေသူသည်ပင် ထိုစကားလုံးကို ပြောခါနီးစဉ်းစားချိန်တွင်ကံတစ်ခု ၊ ပြောလိုက်ချိန်တွင် ကံတစ်ခု ... စုစုပေါင်း ကံနှစ်ခု လုပ်ပြီးနေပြီဖြစ်၍ သူ့ အဆိုကို သူ့ အဖြစ်အပျက်က ပြန်ချေပနေသလိုဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ... အတိတ်ကံကို စကားထဲထည့်ပြောရလောက်အောင် ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မလာခဲ့ပါ....။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို နှစ်ပေါင်း မည်မျှရှာလျှင်တွေ့မည်ဟု သင်ယူဆပါသလဲ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်မရှိခဲ့သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို လူက ပြန်ရှာနေခြင်းမှာ အနည်းငယ် စွန့်စားခန်းဆန်နေနိုင်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကံဆိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင်သည်ကံကောင်းသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါသေးသည်။
ထီပေါက်စဉ်နှင့်တိုက်ပြီးမှ စိတ်ပျက်လက်ပျက် လွှင့်ပစ်လိုက်ရသော ထီလက်မှတ်များလို ကျွန်ုပ်တို့သည် မျှော်လင့်သလို မဖြစ်ခဲ့ခြင်းအတွက် သူငယ်ချင်းများကို လွှင့်ပစ်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက် မည်သူမှ တခုတ်တရ နောင်တမရခဲ့ကြ ...။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးပင် မလုပ်နိုင်ကြဘဲ တစ်ခါတည်း လွှင့်ပစ်လိုက်သည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ တန်ရာတန်ကြေးထက်ပို၍ အဆပေါင်းများစွာမျှော်လင့်ခဲ့သော နှလုံးသွင်းမမှန်ကန်မှု ပြင်းအားများကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုး၍ ပန်းသီးများ၊ သစ်တော်သီးများ၊ မာလကာသီးများနှင့် ဖရဲသီးများ သီးပွင့်ပြီးသကာလ စပျစ်သီးမသီးလာ၍ ခုတ်လိုက်သူများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် စိုက်ပျိုးသလောက်ရိတ်သိမ်းပြီးသားသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သေးသည်။
သူငယ်ချင်းဆိုသည်မှာ ခပ်ဝေးဝေးမှ သူစိမ်းများသာ ဖြစ်လာခွင့်ရှိသော ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုနားလည်သော အဖေသည် သင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုနားလည်သောအမေသည် သင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ သူငယ်ချင်းများထံမှရော မိဘထံမှပါ သင် မုန့်ဖိုးရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူငယ်ချင်းဆိုသည်မှာ သင်သိပ်ချစ်သော ချောကလက် အမည်ရှိသည့် ခွေးမလေးတစ်ကောင် ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းဆိုသည်မှာ ဘော်ဂီအမည်ရတဲ့ ငါးကလေးတစ်ကောင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါသည် ...။ အနည်းဆုံးသူ့ကိုတွေ့လို့ သင်ပြုံးရသည်ဆိုလျှင် သူသည် သင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
အခါတပါးက တရားကျင့်တဲ့ရဟန်းတပါးက တရားထူးအသိအမြင်ကိုရတဲ့နောက်မှာ သူတရားရှုမှတ်နေကြ နေရာက သစ်ပင်လေးကိုပြောတယ် ... အစစအရာရာအတွက် ကျေးဇူးပါကွယ်တဲ့ ...။ ကျွန်ုပ်လည်း တခါတလေ ထိုစကားလုံးကို ကျက်မှတ်ထားမိသည်။ သို့သော် အခုအထိ မပြောရသေးသည်မှာ သူငယ်ချင်းဟူသော သတ္တ၀ါများသည် ၂၁ ရာစုမတိုင်မီ မျိုးသုဉ်းသွားခဲ့သောကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် နေရာမှားရောက်လာသော သစ်စေ့တစ်စေ့လို ကျောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အမြစ်စွဲဖို့ ရူးသွပ်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။
သူငယ်ချင်းများသည် ဘုရားသခင်ကပေးသောလက်ဆောင်ဟူသော စကားကိုပြောခဲ့သူကို ထိုင်ထ အကြိမ်ငါးဆယ် ဒဏ်ပေးချင်သည်။ မရှိသော အရာကို ပေး၍မရကြောင်း သက်သေမပြချင်တော့ပါ ...။ အနည်းဆုံး ထိုသူသည် လူစီဖဲဆိုသော ရုပ်အချောဆုံးနတ်သားအကြောင်းကို တီးကြည့်ခေါက်ကြည့်ဖို့လိုပါမည်...။ ထို လူစီဖဲသည်ပင်လျှင် စာတန်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ ပြတ်စဲပြီးသား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
စီစီဖာ့ထ် လှိမ့်တင်လိုက်သော ကျောက်တုံးတစ်တုံးစာ အဓိပ္ပာယ်ရှိခဲ့သော သံယောဇဉ်များစွာဖြင့် ခင်မင်ခဲ့ခြင်းများသည် ဒီနေ့ဒီအချိန်တွင် နေရာရှုပ်လာသော သတင်းစာဟောင်းတစ်ခုထက်မပိုတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီးပျက်သွားသမျှသည် အကြောင်းတစ်ဝက် အကျိုးတစ်ဝက် တိတိကျကျ ရှိနေသည်ဟု မပြောနိုင်တော့ပါ။ အကြောင်းများသည် သေးငယ်သော ရာခိုင်နှုန်းများစုပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး အကျိုးများသည် ကြီးမားသာပြဿနာတစ်ခုကို လုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီ ...။ ၁၀၀၀၀၁ ကြိမ်မျြောက် ထုနှက်ချက် တစ်ခုထဲကြောင့် ကျောက်ဖျာကွဲအက်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ .. ရှေ့မှ အကြိမ် ၁၀၀၀၀၀ ကိုလစ်လျူမရှုလိုက်ပါနှင့် ...။
နောင်အခါလာ နောင်အခါဈေးဟုတွေးမိသွားချိန်တွင် ... ကျွန်ုပ်သည်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာလာပါသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ကံမကောင်းခဲ့သူတစ်ယောက်သည် သူငယ်ချင်းများနှင့်မပတ်သက်၍ ကံကောင်းခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်ဟု မည်သည့်အခါမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့မယုံကြည်၍သာဖြစ်သည်။ လစ်ဟာသွားသော သူငယ်ချင်းများနေရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် တစ်ခုခု အစားထိုးတပ်ဆင်ကြည့်ရန် စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။ ထိုနေရာသည် နှလုံးသားဖြစ်၍ အစားထိုးပစ္စည်းတစ်ခုကို လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ...။
ကျွန်ုပ်သည် လုံလောက်စွာသော အချိန်တစ်ခုသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည် ...။
လစ်ဟာနေသော နေရာကို စိတ္တာနုပဿနာ အလင်းရောင်ဖြင့် ကြည့်မိသည် ...။
ထိုနေရာတွင် သူငယ်ချင်းများရှိမြဲရှိနေကြသေးသည် ...။
ကျွန်ုပ်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရေလိုက်လွဲခဲ့သော ငါးတစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်မိသွားလေသည်...။ ။
This entry was posted on 1:22 PM and is filed under emotional essay . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Filed under emotional essay
လစ်ဟာသွားသော သူငယ်ချင်းများနေရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် တစ်ခုခု အစားထိုးတပ်ဆင်ကြည့်ရန် စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။ ထိုနေရာသည် နှလုံးသားဖြစ်၍ အစားထိုးပစ္စည်းတစ်ခုကို လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ...။